Madaxweynaha Faransiiska ayaa wacad ku maray inuu nolosha ka dhigi doono mid aan loo dulqaadan karin dadka aan la tallaalin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Faransiiska » Madaxweynaha Faransiiska ayaa wacad ku maray inuu nolosha ka dhigi doono mid aan loo dulqaadan karin dadka aan la tallaalin
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Education • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
"Ma diri doono dadka aan la tallaalin xabsiga," Macron ayaa yidhi. "Marka, waxaan u baahanahay inaan u sheegno, laga bilaabo 15 Janaayo, ma awoodi doontid inaad aado makhaayadda. Hadda ka dib ma awoodi doontid inaad aado qaxwo, mar dambe ma awoodi doontid inaad aado tiyaatarka. Mar dambe ma awoodi doontid inaad aado shaleemada."
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu eedeyay in uu isticmaalay ereyo qalafsan, ka dib markii uu isticmaalay ereyo af-lagaado ah oo uu ku shaaciyay in uu doonayo in uu si ula kac ah nolosha uga dhigo mid aan loo dulqaadan karin muwaadiniinta aan la tallaalin. France si loogu qanciyo inay helaan jabka.
Isaga oo sheegay in uu samaynayo wax kasta oo uu awoodo si uu uga takhaluso shakiga vax ee nolosha bulshada, Macron waxa uu soo jeediyay in si ula kac ah 'ka xanaaqa' kuwa aan la tallaalin ay ku qancin doonto muwaadiniin badan oo Faransiis ah inay qaataan tallaalkooda COVID-19.
Intii lagu guda jiray wareysi uu siiyay wargeyska Le Parisien Talaadadii, Macron Wuxuu sheegay in hadafkiisu yahay inuu nolosha ka dhigo mid adag sida ugu macquulsan kuwa aan la tallaalin, isagoo rajeynaya in xanaaqa kooxda ay si uun u soo dedejiso dad badan in la tallaalo.
"Ma ihi inaan ka xanaaqo dadka Faransiiska. Laakiin dhanka kuwa aan la tallaalin, runtii waxaan rabaa inaan ka cadhoodo. Waanan sii wadi doonaa inaan tan samayno ilaa dhamaadka. Tani waa istaraatiijiyadda, ayuu yiri madaxweynaha Faransiiska, isaga oo intaa ku daray in "tiro yar" ay wali "iska caabinayaan."
"Sideen u dhimi karnaa tiradaas yar? Waan yareyneynaa - waan ka xunahay muujinta - annaga oo ka xanaaqnay xitaa in ka badan," ayuu sii raaciyay, isaga oo sheegay in maamulkiisu "cadaadis saarayo kuwa aan la tallaalin isagoo xaddidaya, intii suurtagal ah, helitaanka dhaqdhaqaaqyada nolosha bulshada."
"Dadka aan la tallaalin xabsiga uma diri doono," Macron ayuu yidhi. "Marka, waxaan u baahanahay inaan u sheegno, laga bilaabo 15 Janaayo, ma awoodi doontid inaad aado makhaayadda. Hadda ka dib ma awoodi doontid inaad aado qaxwo, mar dambe ma awoodi doontid inaad aado tiyaatarka. Mar dambe ma awoodi doontid inaad aado shaleemada."
Tallaalka qasabka ah ayaa laga bilaabay dhowr waddan oo Yurub ah, iyadoo Awstaria ay hogaaminayso 14-jiriinta bisha soo socota iyo Jarmalku qorsheynayo tallaabo la mid ah dadka waaweyn. Dhanka kale, dawladda Talyaanigu waxay sheegtay Arbacadii inay ka dhigayso tallaalka COVID-19 laga bilaabo 15-ka Febraayo qof kasta oo ka weyn da'da 50.
In kasta oo Macron uu bixiyay dammaanad ah in mas'uuliyiintu aysan "si qasab ah" u tallaali doonin ama aysan xiri doonin kuwa aan la tallaalin, faallooyinkiisa ayaa imaanaya iyadoo sharci-dajiyayaasha Faransiisku ay ka doodayaan in la adkeeyo xannibaadaha COVID-19 ee waddanka si loogu oggolaado keliya kuwa si buuxda u tallaalay inay galaan liis dheer oo ah meelaha dadweynaha. Waqtigan xaadirka ah, marka lagu daro caddaynta tallaalka, dadka deegaanka waxay sidoo kale bixin karaan baaritaanka coronavirus-ka xun si ay u galaan xarumaha su'aasha, ka dhaafid Macron wuxuu ku baaqay in la xiro.
Bishii hore, dawladda ee France Waxa kale oo ay sii kordhisay xannibaadaha iyada oo looga baahan yahay muwaadiniinta inay helaan tallaal xoojin ah saddex bilood gudahooda ee tallaalkooda labaad, iyagoo ka digaya kuwa ku guuldareysta inay sidaas sameeyaan aan loo tixgalin doonin inay "si buuxda u talaaleen" nidaamka baasaboorka caafimaadka.
Inkastoo France Markii ugu horreysay ayaa lagu soo rogay baasaboorrada xagaagii hore, sida muuqata wax yar kama aysan qaban sidii ay u joojin lahayd faafitaanka ugu weyn ee cudurrada ee dalka, kaasoo billowday bishii Noofambar, oo ay u badan tahay inay sii hurisay kala duwanaanshaha Omicron ee la kala qaadi karo. In kasta oo ay tirooyinka kiisaska cirka isku sii shareerayaan, codbixintii ugu dambeysay waxay soo jeedinaysaa in muwaadiniin badan ay weli rumeysan yihiin in baasaska uu soo afjari karo masiibada.
Qeybta wareysiga Macron waxaa dhaleeceeyay dhaleeceynta guud ahaan siyaasadda Faransiiska, iyadoo hogaamiyaha xisbiga hantiwadaaga France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, uu ugu yeeray hadaladiisa "wax laga naxo" isagoo ku doodaya in caafimaadku uu ka dhigan yahay "ciqaab wadareed oo ka dhan ah xorriyadaha shaqsiga." Marine Le Pen oo ka tirsan xisbiga garabka midig ee garabka midig ee National Rally ayaa si la mid ah u sheegtay in Macon uu raadinayo inuu kuwa aan la tallaalin u beddelo "muwaadiniinta heerka labaad", halka Senator Bruno Retailleau oo muxaafid ah uu yiri "Ma jiro xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caddaynaysa erayadan."